मान्छे लामो कोमल स्पर्श मार्फत आफ्नो भावना व्यक्त गर्न accustomed गरिएको छ। चुम्बन - आफ्नो भावनात्मक राज्य व्यक्त र तनाव को हानिकारक प्रभाव कम गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। को रो उनको अँगालेको र अङ्कमाल गर्न त उत्सुक मानिस, उनको सान्त्वना किन छ। भावनात्मक दुःखको क्षणमा उहाँले केहि भन्दा यो बढी आवश्यक छ। चुंबन फरक हो: तिनीहरूलाई केही, रोमान्टिक भावनाहरू व्यक्त अरूलाई आवेग को कुरा, र तेस्रो - एक कोमल र reverent मनोवृत्ति। मान्छे केटी चुंबन गर्दा यो कम से कम यो उहाँलाई indifferent छैन भनेर देखाउँछ। अन्यथा, यस्तो क्षण बस खडा गरेका छैनन् थियो।
विभिन्न चुंबन यो क्षण मा तपाईं नजिकै छ मानिस को मनसाय संकेत गर्छ। यसलाई गालामा मा एउटा अनुकूल smack सहानुभूति देखाउनुभएको छ कि मानिन्छ, सबै यो र बुझ्ने हो। को ओठ मा चुम्बन signifies प्रेम। जवान बालिका केही उनीहरूसँग होता, एक मिठाई घटना प्रत्याशा, को सपना। चुम्बन नजर आसन्न जानेबेलामा portend। अक्सर आफ्नो आँखा मा एक खास दुःख र तिर्सना सँगसँगै छ।
चुम्बन हात आइमाइहरु Gallant देखाउँछ, विनम्र हुन यसको आशय। सामान्यतया त काँतर मान्छे साथी आफ्नो चासो देखाउँछ। पहिचान र आदर कहिलेकाहीं व्यक्त हो मा निधारमा एक चुम्बन। यसलाई तटस्थ जस्तो देखिन्छ किनभने अन्तिम बालिका हुनत, सबै को कम से कम सपना। कस्तो चुम्बन गर्छ पेट मा? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्!
छाला गर्न छोएर ओठ सधैं सुखद भावना evoke। र दुवै अभिनेता। चुम्बन मनोविज्ञान त्यहाँ विरोधी एक प्रतिक्रिया छ कि यस्तो छ। एक व्यक्ति तपाईं indifferent छ भने, तरिका प्रतिक्रिया पक्का हुन, र बस कृतज्ञ भई पठाएको उपहार स्वीकार गर्नेछ। प्रायजसो, आपसी हृदयस्पर्शी साझेदार मा यौन इच्छा जगाउने। साथै, चुंबन को स्नायु प्रणाली बलियो बनाउन, मान्छे बीच एक भावनात्मक जडान गठन। ट्याक्टाइल sensations आफूलाई धेरै उपयोगी छन्। यो स्नेह र ध्यान को deprived मान्छे, छोटो जीवन बिताउन र थप ग्रस्त भनेर अवलोकन गरिएको छ।
पेट - यो मानव शरीर को एक विशेष क्षेत्र छ। यो तपाईं को सबै आफैलाई यस्तो ठाउँमा चुम्बन गर्न अनुमति दिन्छ किनभने पनि एक अंतरंग, सकिन्छ, तर केवल निकटतम, दोस्रो आधा। यसलाई उच्च संवेदनशीलता छ, किनभने धेरै ताकत अन्त स्थित ट्रंक तल्लो भाग मा। पेट मा चुम्बन गर्ने साझेदार बीच भरोसाको एक उच्च डिग्री छ।
यो ठाउँमा स्पर्श Quivering कोमल भावना, व्यक्त गर्न सोध्छन् जो व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर पछि यस्तो caresses प्रेम को घोषणामा शीघ्र गर्नुपर्छ। आफ्नो भावना को व्याख्या दुई मान्छे बीच विश्वास र समझ बनाउँछन्।
बन्द गर्न इच्छा
मान्छे पेट मा केटी चुंबन, यो लगभग सधैं उनको सेक्स संग के गर्न उहाँले चाहन्छ के को संकेत। शरीर को तल्लो भाग पर्छ erogenous क्षेत्र, मानिसहरू नछोऊ जो। तपाईं fairer सेक्स को विशेष सदस्यहरूलाई निकटता चाहनुहुन्छ भने, जवान मान्छे आक्रामक र साहसका साथ व्यवहार गर्छन। यस्तो स्पर्श excitation साझेदार उद्देश्य कार्य प्रोभोकिंग गर्न सकिएन।
इच्छा निकटता कहिलेकाहीं मानिस वास्तविक आवेग नजिकै भनेर बलियो छ। चुम्बन पेट आफ्नो प्रेमिका ट्रिम धेरै कोमल र काँतर जवान छन्। आवेग को एक फिट मा जवान अक्सर आफ्नो कार्यहरू नियन्त्रण गर्न ceases। कुनै पनि अवस्थामा, केवल प्रेम एक पेट धेरै नजिक छ चुम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो noncommittal सेक्स र थप केही छैन, केटी नै यसरी स्पर्श गर्न अनुमति असम्भाव्य छ।
बच्चाहरु छन् इच्छा
पेट मा चुम्बन बच्चा छ सचेत वा लुकेका इरादा व्यक्त गर्न सक्षम छ। सम्बन्ध समयमा दम्पतीले मायालु अन्तरक्रिया को अमूल्य अनुभव हुन्छ, मान्छे पूर्ण प्रत्येक अन्य बुझ्न सिक्न। एक मानिस एक महिलाको पेट चुंबन भने, यो यौन इच्छा मात्र होइन तर पनि उनको बच्चाको बाबु बन्ने सम्भव इरादा अर्थ हुन सक्छ। सायद यो सबैभन्दा कोमल स्पर्श, जो केवल हुन सक्छ। यस्तो subtext कोमल र छ भरोसा सम्बन्ध। हरेक जोडी यति राम्रो महसुस र प्रत्येक अन्य बुझ्नुहुन्छ।
मानिसहरूलाई मा मजबूत को एक - एक बच्चा छ इच्छा। आखिर, पनि प्रतिकूल अवस्था अन्तर्गत बच्चा मा प्रकाश को संभावना कुनै एक रद्द। मानिसहरू एक साइन छ: पति पत्नी को पेट चुम्बन लामो समय हो भने, यो चाँडै लामो-प्रतीक्षा गर्भावस्था आउनेछ। यो अभ्यास महिना र वर्ष को लागि एक बच्चा गर्भ धारण गर्न सक्छन् नगर्ने ती जोडे लागि उपयुक्त छ।
Oddly पर्याप्त, भुँडी मा एक चुम्बन मातृ वा बाबुको भावना देखाउन सक्छ। जस्तै यो धेरै दयालु र हृदयस्पर्शी छ जस्तो देखिन्छ। त्यसैले आमाबाबुले बच्चा चुम्बन। तिनीहरूले बिस्तारै आफ्नो नरम पेट उनको ओठ छोएको थियो। सामान्यतया हाँस्न र आनन्द गरिरहेको मजा देखि बच्चा।
अभिभावकको अन्त र एक महिला र एक पुरुष छन्। आमा र बुबा पूर्ण बाह्य नकारात्मक प्रभाव आफ्नो बच्चा जोगाउन गर्न इच्छुक छन्। यस मामला बच्चालाई कायम positivity र जीवनको आनन्द मद्दत गर्छ कि एक सुरक्षा तत्व एक प्रकारको मा मनोविज्ञान प्रेरित दृश्य को बिन्दु बाट पेट मा चुम्बन।
तसर्थ, हामी जो सम्पूर्ण अवधि सम्बन्धमा अधिक गठन गरेको छ कि भरोसा र घनिष्ठता को एक उच्च डिग्री अर्थ एक प्रेम पेट मा, एक चुम्बन गर्दा। यस्तो घनिष्ठ क्षेत्रमा छोएर सधैं यौन connotations छैन, यो कोमल र खुलापन व्यक्त।
घमण्डी मान्छे - यो हुनुहुन्छ?
टेक्नीसियन आन्तरिक संवाद रोक्न: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
बौद्ध। Bodhisattva - यो के हो?
ब्यूनस आयर्स मा Recoleta चिहान। प्रसिद्ध Argentines को दफन स्थान
को "घोडाहरू" खेल मा Izzy के हो?
IOS र 8 राख्न चाहे? अवलोकन आइओएस 8: फाइदा र नोकसान
वर्णन, "Stalker" ( "लामो। युद्ध को दर्शन") को खण्ड
जूलिया Menshov: परिवार, उचाइ, वजन, फोटो, उद्धरण